Vacuum Anosimudza Vagadziri & Vanopa | China Vacuum anosimudza Factory
Vacuum anosimudzandechimwe chedu chakanakisa chekutengesa chigadzirwa chinosanganisira wekusimudza galss anosimudza, ndiro yekubvisa ndiro uye vamwe vacuum lifter zvichingodaro. Iyo michina inotora hunyambiri system kudzora, rimwe boka revhavha system inoshanda, uye rimwe boka rakamira. Inotora American THOMAS DC yekupombi pombi, yeitaly brand METALROTA rinorema-basa rekutyaira vhiri, Swiss BUCHER hydraulic pombi chiteshi uye chete yekuchengetedza-isina bhatiri. Munguva yekushandisa, kufamba kwemagetsi, kusimudza kwemagetsi uye kuteedzera kwemagetsi kunogona kuitika pasina kwekunze mhepo sosi kana magetsi. , Manual kutenderera 360 madhigirii, manyorerwo pafiripi 90 madhigirii uye mamwe mabasa.
Yedu yekuchenesa girazi inosimudza inowanzoshandiswa kumisikidza uye kubata girazi, asi kusiyana nevamwe vagadziri, tinogona kutora zvinhu zvakasiyana nekutsiva mikombe yekukweva. Kana iyo mikombe yekukweva chipanji ikatsiviwa, inogona kutora huni, simende uye mahwendefa esimbi. .
Iyo DXGL-HD mhando girazi rinosveta mukombe anosimudza anonyanya kushandiswa kumisikidza nekubata magirazi mahwendefa. Iine muviri wakareruka uye inoita mushe munzvimbo dzakamanikana dzekushanda. Iko kune yakakura yakakura mhando yemitoro sarudzo pakati pemhando dzakasiyana, dzinogona kusangana nevatengi zvinoda chaizvo chaizvo.
Ehezve, manyore kutenderera uye manyorerwo pafiripi inogona kuve nemagetsi kutenderera kwemagetsi kana flip. Iyi yekudhonza mukombe robhoti ine simba rakasimba uye yakagadzika kusimudza. Yakashongedzerwa neJapan PANASONIC dhijitari yekuratidzira vharuvhu yekumanikidza switch uye bhatiri peturu geji, iyo inogona kunyatso kuongorora kushanda kwakachengeteka kwemidziyo. Iyo yakavakirwa-muvhavha yekumanikidza yekumanikidza muripo sisitimu inovimbisa kuti iyo yese yekuzadza system inochengetwa pane yakaenzana inogara yakachengeteka kumanikidza kukosha panguva yekubata kwegirazi. Mushure mekukanganisa nenjodzi yemagetsi, kumanikidza kubata basa kunogona kuwedzera nguva yekugadzirisa emergency uye kuishandisa zvakachengeteka. Dhizaini inogadziriswa inogamuchirwa. Inogona kuunganidzwa nenzira dzakasiyana zvinoenderana nezvinodiwa, ichichinja chinzvimbo chemikombe yekukweva uye imwe neimwe yekukweva kapu yakagadzirirwa imwe vharuvhu yekudzora, iyo inogona kuyamwa akasiyana maumbirwo uye hukuru hwegirazi.